Ndiani Angandidzidzisa IT Pamhepo?
Zvakanakira Iyo Iyo Aluminium Kuchengetedza Chikamu
Zvese nezve kutakurwa kwezvinhu
Hunhu hweAggregates KweKrete
Imwe nzira uye Isina kujairika Bar Themes Pasi Pose
Wepamusoro gumi Anoshamisa Anonakidza mukati uye Around Thekaddy
Kerala ndiyo yekuenda kurota kune chero munhu anoda zvisikwa. Nepo mvura yemvura yekristaro ichipa mukana wegoridhe kushandisa imwe nguva yakanaka nevako vaunoda, hwema hwezvinonhuwira mumhepo hunovandudza mweya wako. Iyo yakasvibira greenery kutenderedza inorapa…
Kufamba Nyika: 11 Inotyisa Inofanirwa-Ona Zvisikwa Zvishamiso
Kune akawanda masaiti akasiyana kutenderera pasirese akakodzera kushanyira. Asi zvese zvinoenderana nerudzi rwemuongorori iwe. Vamwe vanhu vanoda kuona maguta matsva kubva kutenderera pasirese uye vachiongorora tsika dzakasiyana, vamwe vari mukuzorora pa…
Nei Gweta Chikwata Chichifanira Kuita Kuzvidza Miedzo Nguva Dzese?
Mumamiriro ekudzidzisa, miedzo yekunyepedzera inoitirwa kudzidzisa vadzidzi vezvemitemo kuti vazive zviitiko zvekamuri redare. Zvese zvinhu uye zvisungo zvinofanirwa kuverengerwa kuve nechokwadi chekuti zvinoratidzika sezvazviri. Kuburikidza nemiedzo yekunyepedzera, magweta ane hunyanzvi aigona kunzwisisa nezve kusimba uye kusasimba…
Yepamusoro Tech Trends Kutonga Gore 2018
Zvinoshamisa zvigadzirwa chimwe chazvo chinosanganisira nzira yekuziva kumeso muApple's iPhone X yaive imwe yeakanakisa dhizaini yemadhizaini gore rapfuura. Nepo matekinoroji maitiro achirarama kwenguva pfupi, kuzivikanwa kwechiso kuri kuzotonga indasitiri yeapp mu…
Ongororo Yakadzama Yemarudzi Ese Emafuta
Pese paunonzwa chero chinhu chine chekuita ne "mafuta", chinogara chiri mune negative. Kunyange chiri chokwadi kuti mafuta akawandisa haana kunaka kwauri asi mafuta achiri kudiwa nemuviri. Iwe haunzwe zvakawanda nezvazvo, asi muviri wako unoda mafuta ...
Wepamusoro 7 Anobatsira Webhusaiti Ekufamba KuUnited Kingdom
United Kingdom inonzi Nyika hombe kwete pasina - ndiko kusanganiswa kwenyika ina mune imwechete seti. Royal England nekuona kwayo, medieval castle uye zvivakwa zveWales, kusuwa kwerunako rwemakomo anoyevedza uye nyanza dzeScotland, misha yekare…
6 Webhu Dhizaini Zvikanganiso Hauchazvikwanisi
Iwe wakagadzira webhusaiti inokatyamadza asi uchitadza kubata vashandisi kana vashandisi kunyunyuta nezve kufamba. Panogona kunge paine mashoma webhu dhizaini kukanganisa. Nenzira imwecheteyo, webhusaiti yacho inobatsira uye iri nyore kushandisa asi vashandisi vazhinji vanofunga…
Kune akawanda mablogiki uye makambani eSEO ayo ese anotaura zvinhu zvakasiyana kuti atore chinzvimbo pane yekutanga peji reGoogle. Mumwedzi gumi nemiviri yapfuura takaisa dzidziso dzese idzi pabvunzo. Isu tichaisa ese aya SEO theory pamubhedha…
2017 Digital Marketing Trends Kune Real Estate Nyanzvi uye Entrepreneurs
2016 iri kupera pasi, zvinoreva kuti vazhinji nyanzvi uye vezvemabhizinesi vatove yakazara-steam pamberi kana zvasvika pakuronga kushambadzira kwedhijitari kwegore rinouya. Iri kuumba kuti rive gore rinonakidza mumaindasitiri mazhinji sezvatinonanga muna 2017, uye pamwe…
10 Graphic Design Trends To Rock 2017 uye Beyond
Mafambiro anobuda, bata kutarisisa, kukura uye zvino mushure menguva pfupi kana kwenguva refu inotora mwedzi mishoma kusvika kumakore vanonyangarika panzvimbo. Kana zvasvika kune graphic dhizaini takaona akawandisa mafambiro achionekwa mukati memakore mashoma…
Wakave kubhawa yemitambo. Unogona kunge wakamboenda kune bara bara. Asi wakamboenda pasi pemafungu kuti utore chinwiwa mubhawa yakanyudzwa zvachose pasi pemvura? Ko zvakadii neyaimbova yeruzhinji imba yekugezera yakashandura imba yekutandarira? Kana uchida…
Kuhaya Pearson Airport Limos - Zvimwe Zvakanakira
Chii chiri chako chekutanga kuita nguva iyo iwe yaunoona mota yemota? Kumwe kuita kwako kunogona kushamisika nekuti zvinogona kunge zvisingawanzoitika munharaunda yako. Vamwe vanhu vane pfungwa yekuti avo chete vane mukurumbira ndivo vanogona kuchovha ma limousine asi…
6 Android Zvishandiso Ose Mushambadzi Anofanirwa Kuziva Nezve
Nei Android OS iri sarudzo inosarudzika kune vanogadzira? Android inoita kuti zvinhu zvive nyore uye inonyanya kuvhunduka nharembozha yekushandisa iyo inonyanya kushandisa mushandisi-zvakare. Kuunzwa kwezvishandiso zvakawanda kwave kuita kuti zvive nyore kune vashanduri veApple kugadzira itsva…
Nzira Yokubhururuka Nayo Yekutanga Kirasi Pane A Discount
Kufamba -kirasi yekutanga chinhu chakasarudzika icho vanhu vazhinji vasingakwanise kuwana, asi kana uine ndege refu pamberi pako, kushandisa mari yekuwedzera pane yekutanga kana bhizinesi kirasi kunogona kuita kuti rwendo rwako ruve nyore. Ukabhuka matikiti ako pamhepo, hauwanzo…
Maitiro Ekuvaraidzwa KweMalayalees MuUSA
Malayalam inoonekwa seimwe yemitauro mikuru yeIndia. Kunyangwe Malayalam inonyanya mutauro weIndia nyika Kerala, asi inonyanyoshandiswa mune mamwe matunhu akaita seTamil Nadu neKarnataka. Maererano nekutsvaga, vangangoita mamirioni makumi matatu nemairi evaIndia…
Zvinhu Zvishanu Zvaunofanirwa Kuziva Usati Wajoina A Music Academy
Chikoro chemimhanzi ipuratifomu yakakosha kune vese vaimbi vanoda kuimba, vanoda kuumba hunyanzvi hwavo nekuve chikamu chenharaunda inobatsira mukugadzira vaimbi vane hunyanzvi. Vamwe vanhu vanopokana kuti, kana iwe uine tarenda chairo iwe…
Maitiro Ekubatsira Wako Chef Kuwana Iri Nani Basa-Hupenyu Balance
Kuve mukuru wepamusoro muresitorendi ine mukurumbira zvinoreva chinzvimbo chakasarudzika uye chinoremekedzeka muindasitiri yekugamuchira vaeni. Mubiki anogona kugadzira kana kutyora resitorendi. Ndinoziva resitorendi ine mimhanzi mhenyu padhuze neni paive nemumhanzi waiitika asi
Tora Rwendo KuDelhi Kuzviongorora Sezvisina kumboitika
New Delhi iguta rinokurudzira uye rinonakidza chero zvaro rinogona kunge rakawandisa kune vanhu vari kuenda nenzira inokatyamadza vasingazive zvakawanda nezve zvekuita muguta. Chinyorwa ichi hachikuudze nezve zvikonzero zvekuda kweguta…
Asia/Travel Guides/Ongororo dzekufambisa
Kunakidzwa Kunonakidza Zvinhu Zvekuita MuDubai
Bhadhara rwendo rwekuenda kuDubai, chinzvimbo pakati pevanonyanya kutsvagirwa kwekuenda kupasi uye unowana zvese zvinonakidza izvo guta rinounza patafura. Ichi chinyorwa chinokurukura zvimwe zvinhu zvinotonhorera uye zvinonakidza zvaunogona kuita uchi…
Maitiro Ekuchengetedza Zvimwe Pane Yako Inotevera LA Roadtrip
Kugara uchichengetedza parwendo rwemugwagwa kunogona kuva kwakaomarara, asi zvinokwanisika kana ukaronga kumberi uye nekuomerera pane ako marongero. Kuronga rwendo kuenda kuLos Angeles kunogona kukurira nezvakawanda zvekuona nekuita, saka zano rakanaka kupa…
Zvakajairika Nguva yekurara Zvinetso Zvinosangana neVana uye Maitiro Ekuzvigadzirisa
Mwana wako arikunetseka panguva yekurara here? Kukundikana kugadzirisa zvinobudirira dambudziko iri kunogona kuve kurota kwehusiku iwe nemwana wako. Ongororo dzakawanda dzinoratidza kuti vana vane tsika dzakashata dzekurara vanogona kusangana nekukanganisa kukura kwemuviri uye kugona kudzidza. The great…
Kune avo vanotenda kuti hupenyu pano hwakatangira kunze uko… kure nepasi rose, nemadzinza evanhu angave aive madzitateguru evaIjipita kana maToltec kana maMayan. Vamwe vanotenda kuti panogona kunge paine hama dzemunhu idzo nyangwe kurwira kurarama kune kumwe kunopfuura kwematenga.
Mhosho: Hapana chekudya chawanikwa.
Ndokumbira uende ku Instagram Feed kuseta peji kuti ugadzire chikafu.